ဆံပင်လုပ်ငန်းအတွက်ကတ်ကြေးနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း - ဂျပန်ကတ်ကြေး
အာမခံ & လဲလှယ်ရေး
Gift Card များကို
သင့်ရဲ့လှည်း Empty ဖြစ်ပါသည်
$ 0.00 AUD စုစုပေါင်း
လွယ်ကူသော ၇ ရက်ကြာပြန်လာသည့်ပေါ်လစီ!
ပင်မစာမျက်နှာ / ဆံပင်ညှပ်ဆောင်းပါးများ - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊
လွန်ခဲ့သော / နောက်တစ်ခု
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် စက်တင်ဘာလ 09, 2019 ဖတ်ပြီးသားမိ 3
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဂျပန်ကနေသြစတြေးလျကိုလာခဲ့တာ။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ဆစ်ဒနီအလယ်ပိုင်းမှာအလှပြင်ဆိုင် ၂ ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ လူတိုင်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဆံပင်ပုံစံများကိုရှာဖွေနေပြီး ၀ ယ်လိုအားမှာနှစ်စဉ်တိုးများလာနေသည်။ Takeshi Kitono
သြစတြေးလျနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကဆံပင်ညှပ်သမားတွေနဲ့နေ့တိုင်းစကားပြောနေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-၂၀ ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်၊ အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အမှန်တကယ်တိုးတက်နေပြီး၎င်းကိုရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ရသည် 5.2-2025 အကြား $ 2030 ဘီလီယံခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ။ လူတွေဟာဆံပင်မပေါက်ဘဲရပ်တည်နေတာမို့အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေနဲ့အမျိုးသားဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကြီးထွားလာတယ်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည်ဟု ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်လူအများကပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ဘရစ္စဘိန်းမှဆံပင်အလှဆင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သူ Kylie က "တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်ရှုမြင်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည်။ အလှပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည်ကြီးထွားလာသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စတိုးဆိုင်အသစ်များဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဤတိုးတက်ကြီးထွားလာသောဆံပင်လုပ်ငန်းတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမလိုအပ်ပါဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သို့သော်ခေတ်မီစတိုင်ကျသောတောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုကတ်ကြေးကပ်ထားခြင်းသည်သင်အကျိုးသက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်လူတိုင်းသည်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကိုသြစတြေးလျတွင်အောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ သို့သော်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းရည်များကိုစောစောစီးစီးလေ့လာသင်ယူခြင်းကြောင့်ဆံပင်လုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။ သူတို့ရဲ့နောက်ဆံပင်ပုံစံတွေဖြစ်မယ့်အရာကိုမှာ။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသည်မတူကွဲပြားခြင်း၊ တီထွင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဤလုပ်ငန်းကိုလူကြိုက်များစေသည်။ လူများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လွဲချော်မှုမှ လွဲ၍ အခြားအလုပ်အကိုင်များမတတ်နိုင်သောဘဏ္successာရေးအောင်မြင်မှုကိုလူတို့အားခွင့်ပြုသည့်အကျိုးအမြတ်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ အလှပြင်ဆိုင်အမျိုးမျိုးမှဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်မှရုပ်ရှင်၊ တီဗွီအထိ၊ အလှကုန်ပညာသင်ကြားခြင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားသင့်သည့်အရာသည်သြစတြေးလျ၌အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှဆံပင်ပိုင်ရှင် Takeshi၊ ဂျပန်ဆံပင်ပုံစံနှင့်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်သူများအားပုံမှန်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ Takeshi သည်ခက်ခဲသောအလုပ်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့် Juntetsu သို့ယုံကြည်သည် Yasaka သူ၏ဆံပင်အလှပြုပြင်သူပညာရှင်များကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားနေ့စဉ်စတိုင်ကျသောဆံပင်ညှပ်ပေးခွင့်ပြုသောကတ်ကြေးများ။
"ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု" ရှိအလုပ်အကိုင်စာရင်းဇယား 30 နှင့် 2009 အကြား 2019% အားဖြင့်ခုန်တက်။ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသောအလှပြင်ဆိုင်သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည်အခြားမည်သည့်အလုပ်အကိုင်ထက်မဆိုပိုမိုမြင့်မားပြီးသင်လိုအပ်သမျှမှာအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးနှင့်ဆံပင်ပုံစံများနှင့်သင်သြစတြေးလျားရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလုပ်ခန့်နိုင်သည်။
အမျိုးသားများ၏အရွယ်အစားဆံပင်ကတ်ကြေးရောင်းချမှုသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးသြစတြေးလျတွင်အမျိုးသားဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်လုပ်ငန်း၏တိုက်ရိုက်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည်ခေတ်မှီသောဆံပင်ပုံစံများကိုရှာဖွေနေကြပြီးပညာရှင်များထံမှအကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုများကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးပေးဆပ်နေကြသည်။ အလှပြင်ဆိုင်ဆံပင်အလှကုန်ကျွမ်းကျင်သူများသည်အမြန်ဖြတ်တောက်မှု၊ ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးလိုအပ်ချက်နှင့်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုကူးပြောင်းကြသည်။
ဆံပင်ညှပ်သမားများသည်အသိုင်းအဝိုင်းတိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်လူတို့အားကြည့်ရှုရန်ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်၊ ဆံပင်ပညာရှင်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလုပ်ခန့်ပြီးငွေရေးကြေးရေးအရအောင်မြင်ရန်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အခွင့်အလမ်းများရှိကြသည်။ ဒါကြောင့်လူတွေကဆံပင်လုပ်ငန်းဟာဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကြားတဲ့အခါငါတို့မဟုတ်ရင်ထင်တာပဲ။ အနာဂတ်ဟာAustraliaစတြေးလျမှာဆံပင်ပါ။ သင်စတင်ဖို့အတွက်သင်လိုအပ်သမျှကတ်ကြေးတစ်စုံပါ။
ဂျွန်သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည်ပရီမီယံဆံပင်ကတ်ကြေးကိုအလွန်နှစ်သက်သည် Kamisori, Jaguar ကတ်ကြေးနှင့် Joewell။ ယူကေ၊ ယူကေ၊ Australiaစတြေးလျနှင့်ကနေဒါတို့တွင်ကတ်ကြေး၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း၊
ဇူလိုင်လ 28, 2021
ချစ်စရာခေါင်းစဉ်။ ငါကအမြဲတမ်းကတ်ကြေးနဲ့မပြေးရအောင်ဆုံးမသွန်သင်ခံခဲ့ရပေမဲ့လူတွေဟာဆံပင်လုပ်ငန်းအတွက်ကတ်ကြေးတွေနဲ့ပြေးနေကြတယ်။ ငါအတော်လေးအသက်ကြီးလာပြီ။ လူတွေကသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ (ပထဝီဝင်အနေအထားအရ) ကန့်သတ်ထားပြီးသူတို့ရဲ့အလုပ်ဟာခေတ်နောက်ကျသွားမလားဆိုတာအမြဲတမ်းသိချင်နေတဲ့လူသေကောင်တချို့ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဆေးကုသမှုနယ်ပယ်ကဲ့သို့ပင်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်လုပ်ငန်း၌အလုပ်များအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုမြှင့်တင်ပြီးမင်းဆံပင်ကတ်ကြေးကိုကောက်လိုက်တာနဲ့မင်းဘယ်သွားသွားမင်းခရီးသွားနိုင်တဲ့အပိုဆုကအမြဲရှိတယ်။ လူနေမှုဘ ၀ အတွက်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
သင်၏အစွန်း (ပါး) တွင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုသင်သုံးနိုင်သလား။
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 24, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 3
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 22, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 5
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 21, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 4
English 简体中文 繁體中文 Deutsch Français Afrikaans العربية Български Català Dansk Nederlands Filipino Suomi Ελληνικά עִבְרִית हिन्दी Magyar Íslenska Bahasa Indonesia Italiano 한국어 ພາສາລາວ Lietuvių kalba Lëtzebuergesch Bahasa Melayu മലയാളം Te Reo Māori Монгол ဗမာစာ नेपाली Norsk bokmål فارسی Polski Português ਪੰਜਾਬੀ Русский Español Svenska ไทย Türkçe اردو Tiếng Việt
© 2021 ဂျပန်ကတ်ကြေး. Shopify ရဲ့၀န်ဆောင်မှု
American Express Apple Pay ကို Google က Pay ကို Mastercard PayPal က ငွေပေးချေပါ ဗီဇာ